Faahfaahin Laga Helayo Dagaal Ka Dhacay Magaalada Marka. – Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Dagaal Ka Dhacay Magaalada Marka.
calamada September 13, 2019 1 min read
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Dagaal culus oo Saacadihii lasoo dhaafay Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ay ku qaadeen Saldhigyada iyo Fariisimaha Maleeshiyaatka Dowladda Ridada Federaalka ee Magaalada Marka Ee Wilaayada Shabeelada Hoose.
Inta La Xaqiijiyay Dagaalkan waxaa lagu dilay Todoba Askari oo Labo Ka mid ah ay ahaayeen Taliyaal Ciidan, Sidoo kale waxa uu dhaawaca Maleeshiyaatka Dowladda Ridada Federaalka kor u dhaafayaa ilaa iyo Shan iyo Toban askari.
Magaalada Marka waxaa soo caga dhigtay Labo Diyaaradood oo kuwa Elecobtarka ah kuwaasi oo Magaalada Marka ka qaaday Dhaawacyada askarta Murtadiinta waxeyna geeyeen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Dalka Somalia.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sii kordhiyay Weerarada joogtada ah ee ay la beegsanayaan Maleeshiyaatka Murtadiinta iyo Ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Previous: Dhageyso Warka Duhurnimo-14-01-1441 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 15-01-1441 Hijri.